Dib-u-dhaca Dunida Islaanka iyo damiirka xanuunsanaya ee Soomaalida: Qaybtii 2aad (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 18, 2018 2:36 b 0
Farriin hoggaanka Soomaaliyeed, mid degmo, heer gobol, xildhibaan, wasiir, illaa heer Federaal: “Amaanada laguu dhiibtay si fiican ugaga soobax ilaalinteeda ama iska wareeji xilka!”
Qaybtii koowaad ee mawduuca “Dib-u-dhaca Islaanka iyo damiirka xanuunsanaya ee Soomaalida” waxa aan ku soo qaadaney wareysi qoraal ah oo aan la yeelaney aqoonyahan Abukar Arman, waxa aana dulmarney su’aasha ah, “sidee hormar loo hiigsadaa haddii wadaadkii Soomaaliga ahaa (kii gudaha wax ku bartay iyo kii Carabtaas liidata ee aad sheegtay ay wax soo barteyba) ay gabeen doorkoodii hagid ee bulsho?”
Maqaalkii hore waxa uu dulmarey su’aalaha: maxaa qaldamey? Maxaa Soomaali iyo dunida Islaanka oo dhan maanta ka qaldan? Maxaa se sababey?
Waa mawduuc taxane ah oo Radio Daljir su’aalahaas iyo kuwo kale aan ku baadigoobeyno jawaabahooda. Waa soodhaweynayaa fikirka suubban ee aqoonyahanka iyo diinyaqaanka Soomaaliyeed ee dulucdiisu tahay toosinta iyo mideynta bulshada.
Maanta waa wareysi Abuukar Arman ee isla mawduucaas iyo maxay Soomaali cunaha isugu dhegantahay, maxaa keenay firqooyan-diimeedka soo badanaya ee Soomaalida, maxaa se sababaya dib-u-dhaca raagey ee aqoonyahankii iyo diinyaqaankii Soomaaliyeed oo gabey doorkii hoggaan iyo hormarin bulsho.
Ammuurahaas iyo kuwo kale waxaa aqoonyahan Abukar Arman ka wareystay Jamaal Faarax Adan.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 456 Wararka 17729